Kylian Mbappe Oo Real Madrid Shuruudan Layaabka Leh Ku Xidhay Iyo Lionel Messi Oo Sabab U Ah. - Gool24.Net
Kylian Mbappe Oo Real Madrid Shuruudan Layaabka Leh Ku Xidhay Iyo Lionel Messi Oo Sabab U Ah.
Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda PSG ee Kylian Mbappe ayaa doonaya in uu ka baxo kooxdiisa kadib markii uu xafladii abaal marinaha sanadka ka sheegay in uu doonayo sidii uu masuuliyad dheeraad ah u qaadan lahaa.
Kylian Mbappe ayaa kooxdiisa PSG kaga yaabiyay hadalka uu ku qirtay in uu soo gaadhay bar-badalkii waayihiisa ciyaareed wuxuuna warkaasi ahaa mid si wayn uga farxiyay Florentino Perez iyo maamulka kooxdiisa Madrid.
Haddii ay Real Madrid doonayso in ay la soo saxiixato Kylian Mbappe waxay ku qasban tahay in ay rekoodha suuqa kala iibsiga u jabiso da’yarkan balse taasi ma aha dhibaatada kaliya ee ay tahay in ay ka gudubto.
War uu daabacay Diario Gol oo dalka Spain laga leeyahay ayaa lagu shaaciyay in Kylian Mbappe uu shuruud adag ku xidhi doono haddiiba ay dhacdo in ay kooxaha Madrid iyo PSG ka heshiiyaan iibkiisa.
Kylian Mbappe ayaa dalbadan doona in Real Madrid ay mushaarkiisa si wayn sare ugu qaado isla markaana mushaarkiisa laga dhigo inta uu hadda Lionel Messi ka qaato kooxda Barcelona.
Cristiano Ronaldo ayaa hore maamulka Madrid ay iskugu dhaceen markii ay Barcelona heshiiska waalida ahaa ku abaal marisay Lionel Messi kaas oo ku dhawaaad 50 milyan sanadkii uga xaadira kooxdiisa Barcelona.
Maamulka PSG ayay dhibaato wayn ku noqon kartaa in ay da’yarka Kylian Mbappe ka ogolaan karaan mushaarka waalida ah ee uu Lionel Messi ka qaato Barcelona oo kale maadaama oo ay qolka labiska ka abuuri karto deganaan la’aan wayn.
Laakiin kooxda PSG ayaan si sahlan ku fasixi karin Kylian Mbappe oo ay u arkaan in uu yahay xidiga kooxdooda ugu muhiimsan kadib markii uu Neymar Jr kaga saamayn batay kooxda dhexdeeda.
Si kastaba ha ahaatee, Kylian Mbappe ayaa haddii ay kooxdiisa PSG heshiis la gaadhi karto Real Madrid waxa uu markiisa dalban doonaa mushaar waali ah si uu uga mid noqdo ciyaartoyda ugu mushaarka badan kubbada cagta aduunka.